တရုတ်အပူပေးခြေအိတ် SS01G စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Eigday
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် ကယ်တင်ရှင် Hစားပြီးသားခြေအိတ်တွေကမင်းရဲ့အေးတဲ့ရာသီဥတုအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာနဲ့ပျော်စရာကောင်းစေလိမ့်မယ်။ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ အမဲလိုက်၊ ရေခဲငါးဖမ်းခြင်း၊ လျှောခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လှည်းကျင်းခြင်းနှင့်ခြေအေးသောသူမည်သူမဆိုအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊
ပစ္စည်း: 55% Coolmax +25% Elastic +20% Spandex
အပူ pad: 7.4V 4W, ပေါင်းစပ်ဖိုင်ဘာအပူဒြပ်စင်
Controller: အပူချိန်အဆင့် ၃ ဆင့်၊ အမြင့်/အလတ်/အနိမ့် (၉၉%-၆၆%-၃၃%)၊
အဆင့်မြင့် (အနီရောင်): ≈65℃ 3.5-4 နာရီ;
အလယ်အလတ်အဆင့် (အဖြူရောင်): ≈55℃ 5.5-6 နာရီ;
အဆင့်နိမ့် (အပြာရောင်): ≈40℃ ၁၀-၁၁ နာရီ;
ဘက်ထရီ - အရည်အသွေးမြင့် 7.4V 2200mAh လီသီယမ်ပေါ်လီမာဘက်ထရီအထုပ်၊ 35135 အမျိုးသမီး DC connector
အားသွင်းစက်: 8.4V 1.5A, dual-head charger, 35135 male DC connector US, Europe, UK & AU plugs ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
အထုပ်: ပုံမှန်လက်ဆောင်ပုံး/အရောင်သေတ္တာ (သေတ္တာအရွယ်အစား: ၁၄.၈၄ x ၅.၃၁ x ၂.၇၂ လက်မ)
ated အပူပေးခြေအိတ် ၁ စုံ
charge အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီ ၂ လုံး
● 1pc Dual အားသွင်း
● 1pc အသုံးပြုသူလက်စွဲ
g 1pc ကြော့လက်ဆောင် box ကို
စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန် MOQ: အတွဲ ၁၀၀၀
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအထုပ်: ၁၀၀၀ ပါ
စုပ်ယူနိုင်သော၊ အသက်ရှူနိုင်၊ လျင်မြန်စွာအခြောက်ခံနိုင်သော၊ ပျော့ပျောင်း၊ ထူထဲသော၊ အလွန်ပါးလွှာသောလျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်ကိုသုံးပါ။ ပျော့ပျောင်းသောခြေဖနောင့်နှင့်ခြေချောင်းများကိုတိကျသောချုပ်ရိုးနှင့်ပိတ်ထားသောအပူခံဓာတ်သည်ခြေချောင်းများပေါ်တွင်အေးစေပြီးရာသီဥတုကိုနွေးထွေးစေပါသည်။
၃။ အပူပေးဧရိယာသည်ခြေချောင်းတစ်ဝိုက်၊ ခြေဖမိုးနှင့်ခြေဖဝါးရှေ့အထိဖုံးသည်။
4. 7.4V အားပြန်သွင်းနိုင်သော A- တန်းပေါ်လီမာလစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအထုပ်၊ လုံခြုံပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပါဝါနှင့် CE/ROHS/FCC/UL လက်မှတ်များပါ ၀ င်သောဘက်ထရီ၊
၅။ အဆင့်သုံးအပူချိန်ထိန်းညှိခလုတ်သည်မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အလိုက်အပူအအေးကိုထိန်းညှိနိုင်သည်။ LED အနီရောင်သည်အပူချိန်မြင့်မားရန်၊ အလယ်အလတ်အပူချိန်အတွက်အဖြူရောင်၊ အပူချိန်နိမ့်သောအပြာအတွက်ဖြစ်သည်။
၆။ လျှောက်လွှာ၊ အိမ်နှင့်အိမ်ပြင်လှုပ်ရှားမှုများ၊ စခန်းချခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်း၊ ရေခဲငါးဖမ်းခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်းနှင့်အခြားပြင်ပအားကစား
7. အရည်အသွေးမြင့် After Sales Service
၁၂ လအစားထိုး မည်သည့်အရည်အသွေးနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စများအတွက်မဆို.
ကျွန်ုပ်တို့၏အပူထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အရောင်းအ ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိသည်။ သင့်တွင်အရည်အသွေး၊ အရွယ်အစား၊ ဘက်ထရီသို့မဟုတ်အားသွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကူညီရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါသည်။
up အားသွင်းပါ - အသုံးမပြုမီဘက်ထရီကိုအားအပြည့်သွင်းပါ။
● Plug-in-ဘက်ထရီကိုအိတ်ကပ်ထဲရှိ plug ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
●ဖွင့်ပါ the Controller ကိုဖွင့်ရန် ၂ စက္ကန့်ကြာအောင်နှိပ်ပါ။
။ အပူချိန်အဆင့်များကိုထိန်းညှိရန် ၁ ကြိမ်နှိပ်ပါ
the Controller ကိုပိတ်ရန် ၂ စက္ကန့်ကြာအောင်ပိတ်ပါ။
အားသွင်း adapter ၏မီးသည်အနီရောင်ဖြစ်သည်။ အားသွင်းနေစဉ်
အားသွင်း adapter ၏မီးသည်အစိမ်းရောင်: အပြည့်အားသွင်းထားသည်။
(ဓာတ်ခဲ ၂ လုံးအတွက်အားအပြည့်သွင်းရန် ၃.၀-၃.၅ နာရီခန့်ကြာသည်)
ယခင်: အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီအပူလက်အိတ် Liner လွှာအပူလက်အိတ်
နောက်တစ်ခု: အပူပေးခြေအိတ် SS02B